HTML पाठ अन्वेषक के हो? - अर्धल समीक्षा
एचटीएमएल टेक्स्ट एक्सटरर वेब पृष्ठको पाठ हेर्न र सुरक्षित गर्न एक सजिलो तरीका हो।. यस उपकरणको साथ, तपाईं एचटीएमएल कागजातहरू स्क्रैप गर्न सक्नुहुन्छ र सेकेन्डको बिषयमा सार्थक जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ. यदि तपाइँ निराश हुनुहुन्छ भने साइटमा अचयनित टेक्स्ट र सही समाधान खोज्दै हुनुहुन्छ, HTML पाठ निकाय तपाईंको लागि सही छनौट हो।.
एचटीएमटी टेक्स्ट निकाटरसँग धेरै सुविधाहरू छन्. तिनीहरूमध्ये केही छलफल गरिएका छन् - fuchsia and navy blue wedding.
1. प्रोग्रामरहरूको लागि उपयुक्त
प्रोग्रामर र गैर-प्रोग्रामरहरूका लागि HTML पाठ अन्वेषकले इच्छित वेब पेजहरूबाट कोडहरू र पाठ पठाउनेछ।. तपाईंलाई यो उपकरण प्रयोग गर्न प्रोग्रामिंग कुञ्जीहरू आवश्यक पर्दैन. यसको सट्टा, तपाईंले आफ्नो काम पूरा गर्न एचटीटीएल र पाइजोनको आधारभूत ज्ञान चाहिन्छ. यो उपकरण प्रोग्रामरहरूको लागि तर उद्यमहरू, स्टार्टअपहरू, पत्रकारहरू र विद्यार्थीहरूको लागि पनि उपयुक्त छैन.
2. वेब डिजाइनरका लागि एचटीएमएल टेक्स्ट एक्टर
वेब डिजाइनर आफ्ना ग्राहकहरूका लागि उत्कृष्ट डिजाइनहरू र रचनात्मक वेब पेजहरू सिर्जना गर्न जिम्मेवार छ।. यदि तपाईं एक पेशेवर वेब डिजाईजर हुनुहुन्छ र ठूलो संख्यामा एचटीएमएल फाईलहरू निकाल्नका लागि छ भने तपाईले एचटीएमएल पाठ निकासी प्रयास गर्नुपर्छ. यो उपकरणले तपाइँको सुरक्षा र गोपनीयतालाई इन्टरनेटमा सुनिश्चित गर्दछ, तपाईंलाई राम्रो तरिकाले स्क्रैप गरिएको डेटा प्राप्त गर्दछ. यसबाहेक, यसले छविहरू र भिडियोहरूबाट जानकारी एकत्र गर्दछ र हटाउँछ, उदाहरणका लागि सिर्जनात्मक डिजाइनहरू सिर्जना गर्न सजिलो बनाउँदछ.
3. सबै परिचालन प्रणालीका लागि एचटीएमटी टेक्स्ट एक्स्टोर
एचटीएमटी टेक्स्ट एक्स्टोरको सबैभन्दा विशेष विशेषताहरूमध्ये एउटा हो कि यो सबै विन्डोज प्रणालीहरूमा. यसबाहेक, यो उपकरण कुनै पनि वेब ब्राउजरसँग एकीकृत गर्न सकिन्छ र विन्डोज 98, मे, 2000, NT, विस्टा, XP,7र 8 प्रयोगकर्ताका लागि उत्कृष्ट छ।. यसले तपाईंको फाइल अनबिप गर्नेछ र पढ्न योग्य ढाँचामा पाठ हटाउनेछ.
4. यसले एट्रिब्युसन र लिपिहरू सिर्जना गर्दछ र प्रबन्ध गर्दछ
एचटीएमटी टेक्स्ट एक्स्टोरको साथ, वेबमास्टर्सहरू सजिलै स्क्रिप्ट र एजेन्टहरू दुवै सिर्जना गर्न र प्रबन्ध गर्न सक्छ।. यसले सजिलैसँग सामूहिक समायोजन कार्यहरू निम्त्याउँछ र यसको प्रयोगकर्ताहरूका लागि विभिन्न कार्यहरू गर्दछ.
5. तपाईं असंगत डेटालाई प्रयोगयोग्य जानकारीमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ
एचटीएमटी टेक्स्ट एक्स्टोरको साथ, तपाईं सजिलै संग उपयोगी र पढ्न योग्य सूचना गर्न असक्षम डेटा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।. तपाईंलाई यो उपकरण प्रयोग गर्न कुनै पनि प्रोग्रामिंग कौशल आवश्यक छैन. यसले पहिला तपाईंको एचटीएमएल कागजातहरू स्क्यान गर्नेछ र छनौट गर्न कम्तिमा 40 सामान्यकरण टेम्प्लेट प्रदान गर्नेछ, तपाईँको डेटा आयात गर्न सजिलो बनाउनेछ।.
6. राम्रो समाचार समाचार वेबसाइटहरूको लागि
न्यू-यर्क टाइम्स, सीएनएन, बीबीसी र वाशिंगटन पोस्ट केही सबैभन्दा लोकप्रिय समाचार वेबसाइटहरू हुन्।. एचटीएमएल टेक्स्ट एक्स्टोररको साथ, तपाईं सजिलै संग यी साइटहरूबाट डेटा निकाल्न सक्नुहुन्छ. यसले तपाइँलाई गुणस्तर परिणामहरू प्रदान गर्नेछ र सबै प्रमुख र अल्पसंख्यक त्रुटिहरू सजिलैसँग समाधान गर्दछ. यस उपकरणको साथ, तपाईं गुणस्तरको सामग्री सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ र यसको खोजीमा उत्तम खोज इञ्जिन रेटिङको लागि प्रकाशित गर्न सक्नुहुनेछ.
7. लचीला भुक्तानी योजनाहरू
अन्तिम तर कम्तिमा होइन, एचटीएमएल टेक्स्ट एक्सटरर स्टार्टअपका लागि उपयुक्त छ र विभिन्न प्रीमियम योजनाहरूको साथ आउँछ।. उदाहरणका लागि, यदि तपाईंसँग निजी ब्लग छ र प्रििक डीलहरू खर्च गर्न सक्नुहुन्न भने यसको आधारभूत योजना छान्नुहोस्. आधारभूत योजनाले तपाईंलाई प्रति महिना 20 डलर खर्च गर्नेछ र तपाईंको लागि सुविधाहरू र विकल्पहरू लोड गर्दछ. यद्यपि यसको 14-दिन परीक्षण पनि उपलब्ध छ.